Ma Dhabbaa In Khedira Heshiis La Galay Schalke?
HomeSuuqaMa Dhabbaa In Khedira Heshiis La Galay Schalke?
Kooxda kubadda cagta wadanka Germany ee Schalke ayaa ku biirtay tartanka loogu jiro laacibka khadka dhexe ee Real Madrid, Sami Khedira kaas oo uu xagaaga dhamaan doono heshiiska uu kula joogo kooxdiisa Los Blancos.
Ma jirto koox illaa hadda si dhab ah u shaacisay in ay laacibkan la heshiisay, hase yeeshee naadiga Schalke ayaa xaqiijiyey in ay doonayaan laacibkaas in uu ku biiro kooxda isla markaana noqdo cudud khadka dhexe ka caawisa hamiga naadiga ee hanashada horyaalka oo ay muddo dheer ka qatanayd.
Wargeysyada ciyaaraha qaarkood ayaa xaqiijinaya in tababaraha Schalke, Di Mateo uu shaaciyay in uu doonayo ciyaartoygan. Sidoo kale, Arsenal, Chelsea iyo kooxaha Talyaaniga qaarkood ayaa xiisaynaya, waxase loo badinayaa in is-faham dhex maray Khedira iyo Schelke.
Luis Enrique: “Tababaraha Qaranka Inaan Noqdaan Rabaa”